Gbasara Anyị | Jiangsu Bornsun Medical Instrument Co., Ltd.
Ọrụ Nlekọta Ahụike
Jiangsu Bornsun Medical Instrument Co., Ltd. bụ a na-eduga emeputa nke àgwà ọgwụ na ahụ ike ngwaahịa, tọrọ ntọala na 2015.
Jiangsu Bornsun Medical Instrument Co., Ltd. bụ onye na-emepụta ihe na-emepụta ngwaahịa ahụike dị mma, tọrọ ntọala na 2015. Ezinụlọ anyị na-arụ ọrụ gụnyere njikwa ụgbọelu, iku ume, nkwụghachi / ikuku, nnyefe oxygen na ngwaahịa ịwa ahụ. Dị na Wuxi Jiangsu China mara mma, Bornsun gụnyere ụlọ nkwakọba ihe na nkesa, oghere mmepụta, ụlọ mposi, na ụlọ ọrụ nchịkwa maka ndị ọrụ 50. Anyị na-azụlite ma na-arụpụta ngwaahịa nke anyị, anyị nwere ike ịza nke ọma na mkpa ndị ahịa, ndị na-eweta ngwaahịa na ahịa ahụike na-agbanwe. Na Bornsun, onye ọrụ ọbụla na-adị njikere ma dịkwa njikere inye aka ebe a kacha chọọ ya. Site n'inwe echiche ziri ezi, anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ iji zaghachi ndị ahịa anyị, ndị mmekọ azụmaahịa na ibe anyị ngwa ngwa. Anyị ghọtara na imekọ ihe ọnụ bụ isi ihe na-eme ka anyị nwee ike lebara mkpa nke ndị ahịa anyị anya na ihe ndị ọkachamara ahụike na-achọ.
Jiangsu Bornsun Medical Instrument Co., Ltd. etinye aka na nyocha ngwaọrụ ahụike, rụpụta na ịzụ ahịa. Ndị otu R & D nke MD na ndị isi injinia na-agbaso na ahịa, sayensị na teknụzụ dị ka ihe nduzi, na-azụlite ngwaahịa ndị dị elu na teknụzụ mgbe niile. izute ihe ndị a chọrọ pụrụ iche nke iku ume, anesthesiology na ndị dọkịta na-ahụ maka mberede.
Ngwa iku ume: nkpuchi oxygen, nkpuchi nebulizer, cannula oxygen, mmiri na-ejikọta tube, mmiri ọgwụ mmiri, catheter na-emechi emechi, usoro nchịkwa stool, akpa ntinye infusion, akpa mamịrị, eriri mmiri, eriri afọ.
Anyị nwere 5000 roomsultra-nhicha / ụlọ na-adịghị ọcha na ụlọ nkwakọba ihe 2000㎡office. Ihe ndị a na-eji n'ichepụta na nkwakọ ngwaahịa ahọrọla iji nye ngwaahịa a mma achọrọ iji rụọ ọrụ nke ọma n'ime ọtụtụ usoro ọgwụgwọ chọrọ. Bornsun nwere ike itinye teknụzụ kachasị dị elu maka usoro mmepụta, iji gụọ ndị gụrụ akwụkwọ nke ọma na ndị zụrụ azụ maka ịmịpụta na ndị nyocha ọkachamara maka njikwa mma, yana ịmalite usoro mmepụta afọ ojuju maka ịmịpụta, ịkwakọ na sterilaiz. Anyị nwere oge nnyefe ngwa ngwa na 15-45days.special chọrọ nwere ike ịnye. Anyị nwere OA na ISO13485 asambodo.
Ndị ọrụ injinia ọkachamara anyị ga-adị njikere ijere gị ozi maka nyocha na nzaghachi. Anyị na-enwe ike na-enye gị na nnọọ free samples izute gị chọrọ. O yikarịrị ka a ga-eme mgbalị kachasị mma iji nye gị ezigbo ọrụ na ngwongwo. Maka onye ọ bụla na-eche banyere ụlọ ọrụ anyị na ngwa ahịa anyị, biko kpọtụrụ anyị site na iziga anyị ozi ịntanetị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị ngwa ngwa. Dị ka ụzọ iji mara ngwa ahịa anyị ma kwụsie ike. ọtụtụ karịa, ị nwere ike ịbịa ụlọ ọrụ anyị ịchọpụta ya. Anyị ga-anabata ndị ọbịa si n'akụkụ ụwa niile na azụmaahịa anyị iji wulite mmekọrịta anyị na anyị.